Qurux badan oo deggan, raaxo leh, ammaan ah
KYS-taxane koronto ganacsi ayaa si degdeg ah oo joogto ah u qaadi kara rakaabka.Iyada oo muuqaal fudud, waxay si fiican ula qabsan kartaa dhismaha.Waxay khusaysaa xarumaha dukaamaysiga, CBD, hoteelada.
Kor-u-qaadayaasha Gaadiidka Dadweynaha (KYH/KYXF)
Xarrago leh, deggan, raaxo, ammaan
KYH taxane ah kororka gaadiidka dadweynaha wuxuu qaadi karaa socodka rakaabka weyn muddo dheer wuxuuna ku qalabaysan yahay biraha gacanta oo galaas ah.
Wiishka Guriga-Dhadhaminta weynaanta, oo muujinaysa dadnimada
Ku raaxaystaa gobnimada, muujinta bini'aadminimada
Noocyada kala duwan ee naqshadaynta ee wiishka isticmaalka guriga ee KOYO ayaa ka dhigaya astaan ​​sharafeed iyo farshaxan guurguura oo ku saabsan dhismaha ka kooban bini'aadamka iyada oo la siinayo ku habboonaanta rakaabka.
KOYO-sax-sare iyo wiish-qaadka awoodda-weyn
Wiishka xamuulka ee KOYO wuxuu leeyahay qaabdhismeed adag, kaas oo hubinaya hawlgal siman oo la isku halayn karo.Waxa loogu yeedhi karaa sida gaadhi gaashaaman oo si toos ah ugu socda dhisme, kaas oo siinaya waddo badbaado leh oo gaadiidka xamuulka ah.
Wiish Panoramic-Naqshadayn heersare ah oo qurux badan, kor u qaadaysa noloshaada
heer sare ah oo raaxo leh
Wiishka indho-indhaynta KOYO wuxuu diiradda saarayaa fikradda naqshadaynta ee ku-meel-gaadhka dhismaha casriga ah.Waxay ka dhigtaa deegaanka ku hareeraysan qayb muhiim ah oo ka mid ah dhismaha.Ku-xiridda iftiinka iyo hawada, rakaabku waxay yeelan karaan waayo-aragnimo firfircoon oo dhaqdhaqaaq muuqaal ah waxayna ku raaxaystaan ​​isku-dhafka qumman ee raaxada safarka iyo quruxda muuqaalka.
KOYO Deganaanshiyaha Caqliga Wiishka Caafimaadka
Degdega iyo tixgelin
Taxanaha wiishka caafimaadka ee TBJ oo leh qolka mishiinka iyo wiishka caafimaadka Taxanaha TBJW oo aan lahayn qolka mishiinka ayaa dabooli kara baahiyaha dadka naafada ah oo ay ogaan karaan isticmaalka isku mar ee shaqaalaha caafimaadka iyo sariiraha jiran.Waa mid lagu dabaqi karo dhammaan noocyada isbitaallada.
Wiish Rakaabka Codka Hoose ee KOYO
Tayo gaar ah, raaxo iyo badbaado
Isku darka tignoolajiyada Jarmalka, KOYO Elevator waxay qabataa nidaam xakameyn caqli-gal oo dhammaystiran oo kombuyuutar ah oo leh 32-bit awood yar oo kombuyuutar microcomputer ah, had iyo jeer socota, iyada oo loo marayo fikradda naqshadeynta waxtarka sare, badbaadinta tamarta iyo tayada sare, oo leh qaabeynta dhamaadka-sare, heer sare ah. waxqabadka iyo shaqada xoogga leh.
Mashiin-Qol (MR) / (MRL) Wiish
tayada Premium, raaxada iyo badbaadada shaqada.
Wiishka KOYO wuxuu qaataa tignoolajiyada Jarmalka iyo nidaamka kontoroolka garaadka buuxa ee kumbuyuutarka oo aad isku dhafan.Codsiga kontoroolka kombuyuutarrada yar yar ee 32-bit wuxuu si buuxda u muujinayaa fikradda naqshadeynta ee waxtarka sare iyo badbaadinta tamarta sare.Waxaa lagu gartaa qaabeynta dhamaadka-sare, waxqabad aad u fiican iyo shaqo awood leh.